पुरा पढ्नुहोस ,मोटोपन कम गर्ने सजिलो उपाय। कृपया शेयर ! – मेचीमहाकाली डट नेट NEWS
पुरा पढ्नुहोस ,मोटोपन कम गर्ने सजिलो उपाय। कृपया शेयर !
मोटोपन कुनै हालतमा पनि राम्रो देखिदैन । मोटा शरीर होस या शरीरमा जम्मा फैट होस् कत्ति पनि राम्रो देखिदैन। मोटोपन कई बिमारिको कारण पनि हुन्छ। एदी मोटोपन बढ्यो भने कतिपय मानिस मजाक पनि हुन्छन तेसपछि मानिसहरु मोटोपन कम गर्ने चक्करमा धेरै गलत दबाई सेवन गर्न थाल्छन जसको कारणले उनीहरुको शरीरमा नकारात्मक असर पर्न थाल्छ ।
आजकलको जिबंसैलीमा परिबर्तनको कारण हाम्रो खानाको बानीमा धेरै परिबर्तन भइ रहेको छ जसको कारण आजकल मोटोपन पढ्ने एक आम समस्या भइ राखेको छ तेसपछी मोटोपन कम गर्न एकदमै समस्या हुने गर्छ। तेस्पछि मानिस बजन कम गर्न धरै तरिका हरु अपनाउने गर्छन जस्तो जिम जाने, खाना नखाने, डाइटिंग गर्ने अरु दुब्लो हुन एक न एक तरिकामा लागी रहेका हुन्छन तर पनि आफ्नो मोटोपन कम गर्न सक्दैनन्।
हामी यहाँ जो मोटोपन कम गर्ने तरिका बताउन गइ रहेका छौ तो एकदम प्राकृतिक र सुरक्षित छ जो तपाईले नियमीत गर्नु भयो भने एकदमै मदत पुग्ने छ।
आउनुहोस सुरु गरौँ मोटोपन कम गर्ने प्राकृतिक एबम सुरक्षित उपाए। कृपया यस आर्टिकल लाई पुरा पढौंनु भयो वने मात्र तपाइले राम्रो संग बुज्न सक्नुहुनेछ तसैले आर्टिकल पुरा पढ्नुहोला।
मोटोपन कसरी कम गर्ने?
आजको समयमा मोटोपन एक आम कुरा भयाको छ। सबै जना मोटोपन बाट हैरान छन्। मोटोपन को कारण कति रोग हरु ऊत्पन्न हुने गर्दछ। मोटोपन को कारण एकदमै घातक रोग हरु हुन सक्छ जस्तो कि High ब्लड प्रेशर, डायबटीज़, कैंसर, High कोलेस्ट्रॉल आदि। आफ्नो दिनहुँ जीबनमा केही सामान्य बदलाब ले पनि तपाइको मोटोपन कम गर्न धेरै मदत पुग्छ।
मोटोपन बढ्नको कारण:-
येदि तपाई सोच्दै हुनु हुन्छ कि मोटोपन कसरी बडछ त एसको धेरै कारण हुन्छन। मोटोपन आजकल एकदमै सजिलै बढ्न थालेको छ एस्तो कारण ले शरीर मा धेरै बिमारी पनि सजिलै लाग्न थालेको छ। एदी समयमा नै मोटोपन बढ्ने कारण जान्न सक्नु भयो वने मोटोपन सजिलै कम गर्न सकिन्छ।
गलत खाना-पिना को कारण ले पनि मोटोपन एकदमै छिटो बढ्छ। धेरै चिल्लो भुटेको तेलमा तारेको, तथा चटपटे खाना, कोल्ड-ड्रिंक्स, जंक फ़ूड जस्तो चिज को अधिक मात्रमा सेवन गर्नाले मोटोपन छिटो छिटो बढ्ने गर्दछ। एस्तो खाना शरीर र छालालाई पनि गहिरो असर पार्छ।
एदी तपाई रात रात भर नसुती काम गर्नुहुन्छ या राती ढिलो सुत्ने अनि बिहान ढिलो ऊठ्ने गर्नुहुन्छ भने यो अत्यधिक घातक हुन्छ। बास्तबमा तपाईको शरीर लाई दैनिक ७ देखि ८ घण्टा को पुरा निन्द्रा को अति जरुरत पर्ने हुन्छ एदी तपाई राम्रो संग पुरा निन्द्रा लिनु हुदैन भने तपाइको रगत राम्रो संग सफा हुदैन जसको कारण रगतमा बिस्तारै कोलेस्ट्रोल बढ्दै जान्छ र तपाइको मोटोपन बढ्न सुरु हुन्छ।
येदि तपाई तनाब मा हिन्नु हुन्छ भने पनि तपाइको मोटोपन बढ्न सक्छ। तनाब को कारण तपाईलाई केही गर्ने जागर आउदैन अनी बस्दा बस्दा शरीर कसरत को कमीले गर्दा शरीर मा मोटोपन बढ्न थाल्छ।
धेरै बेर बसी रहनाले
यदि तपाई धेरै बेर सम्म बसी राख्नुहुन्छ भने पनि तपाई को शरीरबाट उर्जा बाहिर निस्कन पाउदैन जसको कारण उर्जा शरीरमा को निर्माण हुन मा नै खर्च हुन थाल्छ जसको कारण शरीर को मोटोपन बढ्न थाल्छ।
समयमा खाना नखानाले
शरीरमा खाना पचाउनको लागि एसिड बनेको हुन्छ, जुन खाना खाने अघि हाम्रो पेट मा निस्कन्छ। जसका कारण भोक बडाउछ। यदि तपाईंले यस समयमा खानु भएन भने, त्यसपछि भोक मेटीन्छ र शरीरमा रहेको एसिड ग्यासले एसिडिटीको समस्या उत्पन्न गर्दछ। यसको कारणले गर्दा पनि वजन बढ्न सुरु हुन्छ।
बिहानको नास्ता न गर्नाले
धेरै मानिसहरूले बिहानको ब्रेकफास्ट को मतलब चिया र बिस्कुट बुझ्दछन्, तर तो होइन किनभने बेलुकाको खाना खाँदा र बिहान उठ्नको बिचमा लामो समय हुन्छ र यदि तपाई बिहानमा चिया मात्र पिउनुहुन्छ भने तपाईको पेटमा एसिड बन्छ। जसको कारणले शरीरमा उर्जा कम हुन्छ जसका कारण पाचन शक्ति कमजोर हुन्छ। तेस्पछि खान राम्रो संग पच्दैन जसका कारण मोटोपन बढ्न सक्छ।
मोटोपन कम गर्नको निम्ती घरेलु उपाय :-
मोटोपन कम गर्नको लागी एस्तो जरुरी नै छैन कि तपाई जिम नै जानुहोस या महँगो दबाई खानुहोस, केही घरेलु नुस्का अपनाएर पनि तपाई सजिलै मोटोपन केही हद सम्म कम गर्न सक्नुहुन्छ। एस्तो मोटोपन कम गर्ने उपाय तल दिएका छ जसको प्रयोग गरेर तपाई आफ्नो मोटोपन कम गर्न सक्नुहुन्छ।
ग्रीन टी पिउनुहोस
ग्रीन टी पिउनाले तपाइको शरीर मा मेटाबोलिज्म बढ़छ । तपाई दिनमा २ तिन ३ चोटी सम्म पनि ग्रिन टी को सेवन गर्न सक्नुहुन्छ। यो एकदमै छिटो मोटोपनघटाउनमा फायदा दिन्छ।
कागती र मह मिसाएको पानी पिउनुहोस्
कागती र मह मिलाएर पानी पिउनाले पनि मोटोपन कम गर्न धेरै मदत पुग्दछ। एक ग्लास हल्का तातो पानी मा एक चम्मच मह, ३ चम्मच कागतीको रस, तेस्मा एक चुटकी काली मिर्च पाउडर हालेर घोल्नुहोस र सधै बिहान पिउनुहोस जसको कारण ले पनि तपाइको मोटोपन मा धेरै फरक देक्नुहुनेछ।
काक्रोमा ९०% पानी हुन्छ। एसले शरीर लाई ताजा राक्छ तथा शरीर को बिसाधी पदार्थ को बहिरा निकाल्न पनि मदत गर्छ साथ साथै एसले आनुहार तथा छालामा पनि राम्रो चमक ल्याऊछ।
लौकी को सब्जी खानुहोस्
यह भी खीरे की तरह ही फाइबर युक्त होती है। लौकी में बिल्कुल भी वसा नहीं होती है, इसकी सब्जी बनाकर भी खा सकते है और इसका रस निकालकर भी पी सकते हैन!
नियमित पानी पिउनुहोस्
मोटोपन घटाउन पानीले धेरै मदत गर्छ। दिनमा कमसे कम ८ गिलास पनि जरुर प्युनुहोस। पानी प्युदा सधै आराम संग प्युनु पर्छ धेरै जसो मानिसहरु पानी एकै चोटी धेरै खाने गर्दछन जुन एकदम गलत हो। पानि प्युदा सधै आरामले प्युनु पर्छ। पानीमा इलेक्ट्रोलाइट्स पाइन्छ। जुन बजन कम गर्न मा एकदमै मदत पुर्याउने हुन्छ।
एक ग्लास पानी मा एक चम्मच सुप हालेर पानी लाई राम्रो संग उमाल्नुहोस, राम्रो संग पानीलाई उमाले पछि एस्लाई चिसो हुन दिनुहोस र चिसो भए पछि सेवन गर्नुहोस। २ महिना सम्म लगातार सेवन गर्नु वायो भने फरक आफै देख्नु हुनेछ।
टमाटर पनि मोटापन कम गर्न राम्रो सहयेता दिन्छ। सधै बिहान २ओटा टमाटर २ महिना सम्म सेवन गर्नु भयो भने एसले तपाइलाई राम्रो फाइदा दिन्छ।
तातो पानीले शरीरको गंदगी बाहर निकाल्छ । तपाइको शरीर जब डिटोक्स हुन सुरु हुन्छ तेस्पछि तपाइको शरीर मा मेटाबोलिज्म बढ्न सुरु गर्छ जसको कारणले तपाई स्लिम देखिन थाल्नु हुन्छ।
मोटोपन घटाउने टिप्स :-
मोटोपन घटाउनुको लागी व्बव्यायाम सबै भन्दा महत्वपूर्ण हुन्छ । तपाई एक्सरसाइज गरेर राम्रो बजन कम गर्न सक्नुहुन्छ। आउनुहोस जानौ कि कस्तो एक्सरसाइज गरे बजन घटाउन राम्रो मदत पुग्छ।
तपाई स्विमिंग गर्न सक्नुहुन्छ। स्विमिंग गर्न मा एकदमै धेरै कैलोरी खर्च हुन्छ ।एसमा पुरा शरीर एक्सरसाइज हुन्छ। यो एक्सरसाइजले शरीर को मांसपेशिलाई पनि टोन गराउछ। मोटापन घटाउनको लागि यो यौटा राम्रो एक्सरसाइज हो।
तपाई जगिंग गरेर पनि वजन कम गर्न सक्नु हुनेछ। बिहान को समयमा हल्का या जति सक्नुहुन्छ तेती दौड लगाएर पनि तपाई राम्रो बजन कम गर्न सक्नुहुन्छ।
मोटोपन घटाउने अभ्यास मा यो सबै भन्दा राम्रो र सजिलो उपाए पनि हो। साइकिलिंग गर्नाले पनि एकदम धेरै बढेको शरीरलाई सजिलै संग कम गर्न सकिन्छ। सधै बिहान आधा देखि एक घण्टा साइकिलिंग गर्नाले पनि राम्रो बजन कम हुन्छ ।
स्किपिंग गर्नाले तपाइको शरीरमा रहेको बोसो कम हुदै जान्छ जसको कारण शरीरको मांसपेशि मजबूत हुन्छन। यो कसरत गर्नाले मोटोपन बाट छिट्टै छुटकारा पाउन सकिन्छ ।
पुशअप गर्नाले हात पाखुरा देखि छाती तथा पेट को राम्रो कसरत हुन्छ। दैनिक ४० देखि ५० पुषअप गरेमा मोटोपन बाट एकदमै छिट्टो छुटकारा पाउन सक्नुहुन्छ।
मोटोपन कम गर्ने दबाई
बाजारमा मोटोपन कम गर्ने धेरै थरी का दबाई हरु पाइन्छन तर डाक्टर को सल्लाह बिना कुनै पनि औसदी को सेवन न गर्नुहोला। डाक्टर को सल्लाह बिना लिगेको औसधि ले शरीर मा खतरनाक रोग निम्त्याउन सक्छ तसैले कुनै पनि औसधि लिनु भन्दा पहिले डाक्टर को आवस्य सल्लाह लिनुहोला !
Previous इटहरीका सुमनलाई कमेडी च्याम्पियनमा जि*ताउन जु्ट्दै इटहरी!
Next आज फागुन महिनाको ७ गते यस्तो छ तपाइको राशिफल हेर्नुहोला!